トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Good indlela scry ukwazi iqabane umphefumlo? (Ukubhula, ukuvumisa, ukufunda wesundu, zetelepathy, ezifana imimoya ukujonga)
Umzekelo, abantu umthandi abathandanayo ngoku ufuna ukwazi ukuba okanye hayi kuba baninzi iqabane umphefumlo kwekamva. Abantu ukuba ndiyamthanda ngoku ndicinga sinqwenela kwakhona ukuba ufuna ibe liqabane umphefumlo.
ivakale ilumeza impendulo nokuba uthethe nabanye abantu malunga iqabane umphefumlo, ukuba ukubhula ukuze ufumanise nxi, iqabane umphefumlo xa ukudibana, ufumana ukuxhoma ukuphuma de kube yini abantu. Ukuba awusele wadibana naye umphefumlo, unako nako ukonwabela ithamsanqa amabali ukwenzela ukulungiselela abakweli ukususela ngoku. Ngu
nokuvumisa ukufumana ulwazi komlingane umphefumlo, kuya kuba lula ukufumana iqabane. Ngaphezu koko, kwimeko ngoku of the lover ayikho iqabane umphefumlo, ukuba ayichithe, uyakwazi ukubona nokuba imeko yangoku ke ziyintoni na nokuxela ithamsanqa. Abantu abathandanayo
ngoku kunye nabantu abo bakufuna ukwazi ukuba okanye hayi iqabane umphefumlo, masikhe ngeendlela zonke sebenzisa nokuxela ithamsanqa. In
inxalenye uncedo ukukhangela iimpawu kunye soulmate of ezahlukeneyo ukuvumisa
, ndicinga ntoni na izindululo wethamsanqa amabali ukukhangela ukuba iqabane umphefumlo.
iye eyaziwa njenge ikhadi ithamsanqa-amxele kwikhadi bhula. ikhadi bhula usebenzisa ikhadi athathwe yahlukile mfanekiso, koko Lithamsanqa kaThixo ngokuhlanganisa intsingiselo ebekwe emfanekisweni kunye phezulu nasezantsi sikhundla. Ngu ukutolika intsingiselo ikhadi tofo, uyakwazi ukuchaza malunga iqabane umphefumlo.
le ngeenkwenkwezi eneenkcukacha ngaphezu nokuvumisa, koko nguThixo, kuquka ukuzalana iiplanethi ezahlukeneyo. Igama lekroza ibe ngumqondiso, langa kunye iimpawu ulwalamano, nayo Ukuxelela ngemvelo mntu ithamsanqa yi ubudlelwane ngokokuma phakathi iiplanethi. Kuba kusenokwenzeka ukuba ukuqikelela indawo ngakumbi ukusuka nokubekwa lokubonakala kwenkwenkwezi, uya kukwazi ukufumana phandle iqabane umphefumlo yaye xa nazo naphi.
- esundu ukufunda
Ndicinga ukuba abantu abaninzi bakaThixo ukuba sele sibonile ukuba imigca umtshato entendeni. imigca Umtshato, ukuba ukusuka ezantsi entendeni ngomnwe encinane umgca ophakathi komgca ngokweemvakalelo, indawo kunye ububanzi emgceni, ixesha elide, njl, ungenza savumisa ukuba ixesha lomtshato luni macala. Ukongezelela, abantu ukubumba zokufunda kunye nezandla yesundu ziyafana iye kwakhona wathi kukho ithuba eziphakamileyo iqabane komphefumlo.
zetelepathy senzelwe ukuba ukufunda kwixesha elizayo kunye neengcinga yomntu ngokusebenzisa ingqiqo yesithandathu ngaphaya mvo ezintlanu abantu. Ukukwazi, kuba kwakhona va iliza leqabane umphefumlo nifuna abantu kuphela ukufumana ithamsanqa, ungafumana i iziphumo kungokuvumisa echanekileyo. Ukongeza, ungabona kwakhona imvakalelo ukuba umntu uyazibuza ukuba yenzeka njani na enxamnye nam. Ukusebenzisa i
? umbono ngokomoya
wayephemfulelwe, umbono yokomoya imeko leyo ngaphaya kwexesha kunye nendawo ukuba njengombala ividiyo. Akuphelelanga owehlabathi lomoya, afana nabantu zangoku kunye neziganeko kweli hlabathi, uyakwazi ukubona elidlulileyo, nangenxa elizayo. Ngenxa yoko, unika ithamsanqa nokuba ngoku okanye wadibana iqabane umphefumlo, kukho kungenzeka ukuba kuhlangana kwixesha elizayo. Ndingatsho ngokubanzi xa phantsi
kungokuvumisa efunekayo xa ekufumaneni
ezahlukeneyo ithamsanqa amabali, ngenxa kungokuvumisa ngutitshala ukuze bayenze nokuxela ithamsanqa kukuba ezahlukeneyo. Xa iphindaphindeke abaxeli-mathamsanqa abe ithamsanqa-ngokuxelwa ngendlela efanayo, mhlawumbi kwimeko nganye isiphumo eyahlukileyo.
Ukongeza, ungahle japan elungileyo uyaphuma, kodwa akuyomfuneko ukuba bawe. Kuphela yokugula kugcinwe ukulandeleka, ukuba kwenzeka njani na ukusetyenziswa zezincomo kungokuvumisa ukuchola ekuyeni iziphumo ezilungileyo.
Awukwazi ukuchaza. Ukongezelela, abantu ukubumba zokufunda kunye nezandla yesundu ziyafana iye kwakhona wathi kukho ithuba eziphakamileyo iqabane komphefumlo.
Wena. Ukusebenzisa i